Amaxesha ama-6 uKhloe Kardashian noTristan Thompson Basinike i #CoupleGoals
Amaxesha ama-6 uKhloe Kardashian noTristan Thompson Basinike i #CoupleGoals Phambi koshicilelo lokukopela.
Ingqokelela ye-GABRIELLE UNion yeNew York kunye neNkampani yiBoss-Chic Bomb!
Newe mama Khloe Kardashian Ngumfazi oqinileyo owomeleleyo phakathi kwesihelelo sokukrexeza esaphule isithandwa sakhe kunye notata womtsha wakhe, umdlali we-NBA Tristan Thompson, wabanjwa esithi ukreqa kwinkanyezi yokwenyani, ngaphezulu kwesinye! Nangona kubonakala ngathi isiphelo singasondela kwesi sibini, ngokwemithombo (Nangona bonwabile ngoku ngentsimbi yabo yovuyo), asinakusinceda kodwa cinga ukubuyela ngawo onke amaxesha ebesisebenzisa ii #coulplesgoals naphina sibona imbonakalo yazo eqaqambileyo.
bobabini Tristan Thompson kwaye Khloe Kardashian unento yokwenza nembonakalo entle. Ukususela kwimini ukuya kwixesha lokujonga ebusuku, esi sibini sasisoloko sijongeka silungile; kodwa akukho nto imangazayo xa uku no Kardashian. Elona candelo lilungileyo? Umdlali weCleveland Cavaliers uyazi ukuba angatshatisa njani ukubukeka kwakhe mfazi nokuba unxibe ntoni. Ayisiyonto emnandi kwaphela?
Apha amaxesha ama-6 kuthiwe # amaqebengwana asezinto ezibonakala kuKhloe kunye nokujonga kukaTristan…
Ifoto yeTyala: uPhendlo lukaGoogle | I-Peoplemagazine, i-Gettyimages
Kwezi zinto zijongeka njani ongathanda ukuphinda uzenze kunye nezinye? Ngaba ucinga ukuba babethelele? #Iziqwengana zeNgoba umdlalo wesitayile?
oosaziwayo Uhlobo lomntu Khloe Kardashian isitayela sokudumisa samva nje Imagazini yabantu Tristan Thompson
UJessica Agorye Aprili 25, 2018
Mangalisa! Ungaba Njani naona Ndwendwe esiDibileyoyo kulo naluphi na uhlobo lomtshato